ECommerce nhau iyi webhusaiti yakanangana nekuunza nhau dzichangoburwa uye nongedzo kubva pasirese yezvekutengesa zvemagetsi kune vafambisi vayo. Yakavambwa muna 2013, munguva pfupi yakatozvisimbisa se chirevo munharaunda yako, kunyanya nekuda kwechikwata chevagadziri, icho chaunogona kutarisa pano.
Kana iwe uchida kuona iyo runyorwa rwemusoro iyo yatakabata nayo pane saiti, unogona kushanyira iyo chikamu chechikamu.
Kana iwe uchida shanda nesu, zadzisa iyi fomu uye isu tichazosangana newe nekukurumidza sezvazvinogona.
Ini ndinoda kushambadzira uye matekiniki ekuvandudza zvitoro zvepamhepo kana eCommerce. Naizvozvo, ini ndinogovana ruzivo rwangu nemisoro ingave inonakidza kune vaverengi, kungave nekuti vane chitoro chepamhepo kana yavo yega brand.
Kuda nezve tekinoroji uye ecommerce. Mutengi wemarudzi ese ezvigadzirwa zvepamhepo, uye ane ruzivo mukugadzira zvitoro zvepamhepo zvine mapuratifomu akadai sePrestaShop uye zvakafanana. Nguva dzose uchiedza kuve wazvino pane zvese zvine chekuita nenyika ino.
Diploma muBhizinesi Sayenzi, mubazi reKushambadzira, Kushambadzira uye Kushambadzira, yakanyudzwa munyika yenhau, munzvimbo dzese kubva kumatekinoroji matsva kusvika kuzvido, nyanzvi mune zvemari, Forex, mari, Musika weStock, kudyara uye nhau mumari, asi zvakanyanya anoda misika yepasirese neyekunze, musanganiswa wekutanga kuwana uye kuendesa yakanakisa nhau uye kuraira kune vanoverenga zvemari.
Kushushikana kwenzvimbo yepamhepo, nekuti iripo mune ese mashandisiro emari atinoita. Naizvozvo, hapana zvirinani kupfuura kutarira ziso panhau dzichangoburwa mukutengeserana kwemagetsi.